Wararka Maanta: Arbaco, May 2 , 2012-AXMED CABDISALAAN: "Dhaawacaygu ma ahan mid macno leh, waxaana dib ugu soo laabanayaa Gobollada Dhexe"
Siyaasiga Axmed C/salaan oo saxaafadda la hadlay markii dhaawiciisa laga qaadayay degmada Dhuusomareeb ayaa sheegay inuu aad u wanaagsan yahay uuna howshiisa uu waday sii wadi doono.
"Alxamdulillaah... shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in Ilaahay uu wax dilo waxna nooleeyo... anigu waan noolahay dhaawaca i gaarayna dhib ma lahan. Labadii xildhibaan ee dhintay Allaha u naxariisto," ayuu yiri Axmed C/salaan.
Mas’uulkan oo ahaa hoggaamiyaha xildhibaannadii ku sugnaa gobollada dhexe oo halkaas u joogay dhisidda maamul gobholeed cusub oo laga hirgeliyo gobollada dhexe ayaa sheegay ayaa intaas ku daray in Al-Shabaab ay ay doonayeen inay ka ridaan indhaha shacabka Soomaaliyeed, wuxuuna bulshada ugu baaqay inay sidii midnimo loo gaari lahaa u midoobaan.
"Al-shabaab waxay ku talogashay inay Ummadda Soomaaliyeed indhaha ka riddo, Soomaali badan ayay dileen; taasna Alle ayaa wax dila mooyee iyaga waxba ma dili karaan," ayuu hadalkiisa raaciyay.
Axmed C/salaan wuxuu sheegay inuu dib ugu soo laaban doono gobollada dhexe ayna howshii ay u joogaan sii-wadi doonaan, isagoo sheegay in xildhibaannada ku sugan hadda ay howsha sii-wadayaan.
Weerarka uu ku dhaawacmay Axmed C/salaan ayaa waxaa sheegatay Al-shabaab oo ku sheegtay inuu ahaa mid aargudasho iyo ka hortag shirqool isugu jiray, iyadoo ay ku dhinteen weerarkaas, xildhibaan Yuusuf Mire Seeraar iyo xildhibaan C/weli Sheekh Maxamuud.